Njem nlegharị anya ga-abụrịrị akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe na mgbake ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem nlegharị anya ga-abụrịrị akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe na mgbake ọrịa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
(HM Climate Conference) Minista njem nlegharị anya, Hon. Edmund Bartlett (n'aka nri) sonyeere (site n'aka ekpe) Secretary Cabinet for Tourism and Wildlife, Hon. Najib Balala; Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Saudi Arabia Ahmed Aqeel AlKhateeb; na Onye bụbu Onye isi ala Mexico, Ọkachamara Felipe Calderón maka foto, na-esochi òkè ha na Nzukọ Mgbanwe ihu igwe nke UN nke 26. Ndị United Kingdom na-akwado mmemme a, yana mmekorita ya na Ịtali, iji mee ka ọrụ dịkwuo elu maka ebumnuche nke nkwekọrịta Paris na UN Framework Convention on Climate Change.
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett taa sonyeere ndị isi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya sitere na Kenya na Saudi Arabia iji gbaa ndị na-eme iwu ndị ọzọ ume na 26th UN Climate Change Conference (COP26) na Glasgow, UK, ime njem nlegharị anya akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe na mgbake ọrịa COVID-19.
Ihe abụọ dị oke egwu na-emetụta mgbake site na ọrịa na-efe efe - nha nha nke ọgwụ mgbochi na ịla azụ ọgwụ mgbochi.
Nke abụọ bụ iji teknụzụ na-eme ka nkwurịta okwu ka mma na ozi eziokwu.
Ọ gwụla ma anyị rutere n'ókè ebe ihe karịrị 70% n'ime anyị na-enweta ọgwụ mgbochi zuru oke, usoro mgbake ahụ ga-adị ngwa ngwa ngwa ngwa.
N'oge okwu ya, Bartlett kwuru na ọgwụ mgbochi abụrụla nnukwu enyí n'ime ụlọ na-akọwa ọkwa mgbake zuru ụwa ọnụ. “Ihe abụọ dị oke egwu na-emetụta mgbake site na ọrịa a - nha nha nke ọgwụ mgbochi na ịla azụ ọgwụ mgbochi. Ịha nhatanha n'ihe gbasara nkesa ka mba niile nwee ike gbakee ọnụ. Nke abụọ bụ iji teknụzụ na-eme ka nkwurịta okwu ka mma na ozi eziokwu gbasara ọgwụ mgbochi yana ngwa ya na ịdị irè ya ka ọtụtụ mmadụ wee ghara ịla azụ, "Bartlett kwuru.
"Ọ gwụla ma anyị rutere n'ókè ebe ihe karịrị 70% n'ime anyị na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke, usoro mgbake ga-adị ngwa ngwa. Anyị nwere ike ịhụ onwe anyị n'ọrịa ọzọ dị njọ karịa Covid-19, ”Ka ọ gbakwụnyere.
Jamaica Mịnịsta Bartlett, Odeakwụkwọ Kabinet nke Kenya maka njem nlegharị anya na anụ ọhịa, Hon. Najib Balala, na Minista njem nlegharị anya maka Saudi Arabia, His Excellence Ahmed Al Khateeb, kesara echiche ha banyere okwu ndị a n'oge mkparịta ụka panel na Nzukọ ahụ, bụ nke onye bụbu President Mexico, bụ Felipe Calderón, kwadoro.
N'oge okwu ya, Minista Al Khateeb kwusiri ike mkpa ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na mbọ mgbake mgbanwe ihu igwe. "Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya, ọ na-aga n'ekwughị okwu, chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ. Ma, ruo ugbu a, ịbụ akụkụ nke ngwọta dị mfe ikwu karịa ime. Nke ahụ bụ n'ihi na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya kewapụrụ nke ukwuu, gbagwojuru anya ma dị iche iche. Ọ na-agafe ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ, "o kwuru.
Ọzọkwa na panel bụ Rogier van den Berg, Global Director, World Resources Institute; Rose Mwebara, Onye isi & Onye isi nke Climate Technology Center & Network na United Nations Environment Programme (UNEP); Virginia Messina, SVP Advocacy, World Travel & Tourism Council (WTTC); Jeremy Oppenheim, Onye guzobere & Onye Mmekọ Senior, Sistemụ; na Nicolas Svenningen, onye njikwa maka Global Climate Action, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Ọgbakọ nke iri abụọ na isii nke ọgbakọ ndị otu (COP 26) na UNFCCC bụ United Kingdom na mmekorita ya na Italy na-akwado. Nzuko a achịkọtala ndị otu ọnụ iji mee ngwangwa ime ihe maka ebumnuche Paris Agreement na UN Framework Convention on Climate Change. Ihe karịrị ndị isi ụwa 190 na-esonye, ​​yana iri puku kwuru iri puku ndị mkparịta ụka, ndị nnọchi anya gọọmentị, azụmahịa na ụmụ amaala maka ụbọchị iri na abụọ nke mkparịta ụka.